Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maantay Oo Sabti Ah 18 June
HomeSuuqa kala iibsigaWararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maantay Oo Sabti Ah 18 June
June 18, 2022 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada, Warka Xiisaha Leh 0
Weeraryahanka Portugal Cristiano Ronaldo, oo 37 jir ah, ayaa isha ku haya inuu ka tago Manchester United, iyadoo Jose Mourinho Roma iyo Sporting Lisbon ay xiiseynayaan. La Repubblica, in Italian, subscription needed
Arsenal ayaa si taxadar leh ugu rajo weyn saxiixa weeraryahanka reer Brazil ee Manchester City Gabriel Jesus, oo 25 jir ah. Gunners ayaa rajeyneysa inay ku filnaato 30 milyan ginni laakiin City ayaa dooneysa 50 milyan ginni. Sky Sports
Gunners ayaa weli laga yaabaa inay la soo wareegto ciyaaryahanka khadka dhexe ee Leicester iyo Belgium Youri Tielemans, oo 25 jir ah, inkastoo ay qarka u saaran yihiin inay dhameystiraan heshiiska khadka dhexe ee Porto ee Fabio Vieira, 22, kaasoo Portuguese ah. Evening Standard
Arsenal waxa ay sidoo kale dooneysaa garabka Leeds ee Brazil Raphinha, 25, iyo daafaca Ajax ee Argentine Lisandro Martinez, 24. Athletic
Tababaraha Chelsea Thomas Tuchel ayaa jeclaan lahaa inuu ku bedelo weeraryahanka Belgium Romelu Lukaku, 29 – kaasoo diirada u saaran Inter Milan – 33 jirka reer Poland weeraryahanka Bayern Munich Robert Lewandowski, laakiin waxaa jira caqabado waaweyn oo hortaagan dhameystirka labada heshiis. ESPN
Bartilmaameedka Barcelona Lewandowski ayaa sheegay inuu weli doonayo inuu ka tago Bayern laakiin uusan dooneyn inuu xumeeyo xiriirka kala dhexeeya kooxda Jarmalka isagoo ku qasbay inuu u dhaqaaqo. Express
Chelsea ayaa wax ka weydiisay difaaca Inter Milan iyo Slovakia Milan Skriniar, oo 27 jir ah, heshiis is dhaafsi ah oo uu Lukaku ku lug yeelan karo inuu dib ugu laabto kooxdiisii ​​hore ee Talyaaniga. Mail
Kabtanka Blues Cesar Azpilicueta, oo 32 jir ah, ayaa u baahan doona inuu soo gudbiyo codsi ku saabsan suuqa kala iibsiga haddii uu doonayo inuu u dhaqaaqo Barcelona . Daafaca Spain ayaa ku jira sanadkii ugu dambeeyay ee qandaraaskiisa. Sun
Tottenham ayaa ugu cadcad saxiixa daafaca Ingariiska ee Middlesbrough Djed Spence, oo 21 jir ah, iyadoo Nottingham Forest ay aqbashay inaysan u badneyn inuu ku biiro, isagoo xilli ciyaareedkii hore amaah ku joogay City Ground. Waqooyi Echo
Manchester United ayaa kalsooni ku qabta in Barcelona ay hoos u dhigi doonto 73 milyan ginni oo ay ku doonayso ciyaaryahanka khadka dhexe ee Netherlands Frenkie de Jong, oo 25 jir ah, sababtoo ah dhibaato dhaqaale oo haysata.
West Ham ayaa dooneysa inay amaah ku siiso weeraryahanka Croatia Nikola Vlasic, 24, iyadoo ay xiiseynayaan Hadjuk Split iyo Torino . Dalmatinskiportal, ee Croatian
Xiddiga garabka uga ciyaara Aston Villa iyo Masar Trezeguet, oo 27 jir ah, ayaa waxaa dooneysa kooxda Turkiga ee Trabzonspor . Mail
Sevilla ayaa diyaar u ah inay 6.9 milyan ginni ku dalbato weeraryahanka Rangers iyo Colombia Alfredo Morelos, 25. Fichajes
Fulham ayaa qarka u saaran inay 7 milyan ginni kula soo wareegto weeraryahanka Israel Manor Solomon, oo 22 jir ah, kaasoo ay kala soo wareegayaan Shakhtar Donetsk. Sun
Weeraryahanka Watford ee Nigeria Emmanuel Dennis, oo 24 jir ah, ayaa ku jira liiska bartilmaameedyada Everton xagaagan haddii weeraryahankooda Brazil Richarlison, 25, uu baxo. Mail
Nottingham Forest ayaa ku dhow inay heshiis la gaarto daafaca Faransiiska ee Mainz Moussa Niakhat, oo 26 jir ah.
Southampton ayaa rajo wanaagsan ka qabta saxiixa daafaca Mareykanka ee Bayern Munich Chris Richards, oo 22 jir ah. Give Me Sports
Celtic ayaa wajaheysa dagaal cusub oo kaga imaanaya Ajax iyadoo dagaalka kula jirta Lommel iyo Brazilian-ka khadka dhexe Vinicius Souza, 22. Record)
Paris St-Germain ayaa qarka u saaran inay ku garaacdo dhowr kooxood oo Premier League ah inay 34 milyan ginni kula soo wareegto ciyaaryahanka khadka dhexe ee Porto Vitinha, 22. 90min
Hibernian ayaa qarka u saaran inay beeca xorta ah kula soo wareegto ciyaaryahankii hore ee Sunderland iyo Republic of Ireland Aiden McGeady, oo 36 jir ah. Record